သမီးလေး ဆယ်တန်းအောင်သွားသည့်နောက် ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ ပို့ပေးသည်။ သမီးလေးက ကြိုးစားသဖြင့် ကွန်ပျူတာလည်းတော် အင်္ဂလိပ်စာလည်းတော် ဖြစ်နေသည်။ ထိုတော်လှ တတ်လှသော သမီးလေးအပေါ် စိတ်ရိုင်းဝင်မိသူမှာ သူကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်နေသည်။ သဘာဝစည်းကမ်းနဲ့အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော ရင်သားများ တင်လုံးများမှာ သူ့အား ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်၍ မရနိုင်တော့သဖြင့် တစ်ည သမီးအခန်းကို ဝင်အိပ်ခဲ့သည်။ ခိုင်နှင်း၏ ဘဝထိုညတွင် ကျေးဇူးရှင်အား အပျိုစင်ဘဝဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရသည်။ အကိုကြီး အတော်လေး ဆာနေသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထိုညတစ်ညတည်း သုံးချီဆွဲသည်။ သူမက နာပင်နာငြားသော်လည်း ကြိတ်မှိတ်အောင့်ခံပေးသည်။ နောက် နှစ်ရက် သုံးရက်အထိ အကိုကြီးကို မတွေ့ရ။ ရှက်၍လား။ အားနာ၍လား ဘာကြောင့်တော့ မသိ။ တစ်ညတွင် အကိုကြီး ခိုးပြန်လာမှန်း ခိုင်နှင်းသိသည်။ သားဖြစ်ကြသော … Read more
၂၀၂၀ပွညျ့နှဈ၊ မတျလတှငျကငျြးပသညျ့ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့စာမေးပှဲ အောငျစာရငျး မြားကို သွဂုတျလ ၉ရကျနတှေ့ငျ ထုတျပွနျကွညောပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျးက ပွောကွားထားပါတယျ။ ပညာရေး ဝနျကွီးဌာနက သူတို့ရဲ့ website ကနေ ကွညောပေးမှာပါ။ ရုပျမွငျသံကွား ကနလေညျး ထုတျပွနျပေးမယျ။သကျဆိုငျရာ ကြောငျးကတော့ ကပျရမှာပါ။ အောငျစာရငျး လာကွညျ့တဲ့အခါမှာ လူစုလူဝေးမဖွဈရနျအတှကျအစီအစဉျမြားလညျဆောငျရှကျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။၂၀၂၀ခုနှဈအတှကျ တက်ကသိုလျဝငျ စာမေးပှဲကို ဝငျရောကျဖွဆေိုထားသူပေါငျး ၉၁၀,၂၇၃ ယောကျရှိပွီး ပကျြကှကျသူဦးရမှော ၆၁,၁၃၄ ယောကျရှိတာဖွဈပါတယျ။ အခွခေံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဒေါကျတာတငျမောငျဝငျး ကလညျး ယခု တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲရလဒျမှာ (၃၈)ရာခိုငျနှုနျး အောငျမွငျမှုရှိတယျလို့လညျး ပွောကွားထားပါသေးတယျ။ ယခငျ ၂၀၁၉တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ အောငျခကျြရာခိုငျနှုနျးမှာ ၃၁.၄၄ %သာ ရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Credit – WE Media Zawgyi … Read more
Covid ကာလမှာ အခကျအခဲကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ရုပျရှငျလောကသားတှအေတှကျ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျနဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့အားကစားဝနျကွီးဌာနဝနျကွီး ဒေါကျတာမွငျ့ထှေး၊ ရုပျရှငျအစညျးအရုံး ဥက်ကဌ၊ မင်ျဂလာရုပျရှငျရုံဥက်ကဌ တို့က အပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။အနုပညာလုပျငနျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ရိုကျကူးရေးလုပျငနျးတှေ နဲ့ ရုပျရှငျရုံတှဟော Covid – 19 ကူးစကျရောဂါကွောငျ့ မတျလ အစကတညျးက ရပျနားခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလုပျငနျးတှေ ရပျနားလိုကျရတာ အခုဆိုရငျ အခြိနျကာလ (၄) လကွာမွငျ့ခဲ့ပါပွီ ။ အနုပညာအလုပျတှေ ရပျနားလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ အနုပညာလောကသားတှေ အခကျအခဲမြားစှာ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အကွောငျးကို မင်ျဂလာရုပျရှငျရုံအုပျစု ဥက်ကဌ ဦးဇျောမငျးက နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျကို ဇူလိုငျ(၂၈) ရကျနေ့ မနကျက အှနျလိုငျးဆှေးနှေးပှဲမှာ တငျပွပွောဆိုခဲ့တာပါ။ Covid ကာလမှာ အခကျအခဲ … Read more
Categories Knowledge, Online News Leaveacomment
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချွှန်ဘူရီ ပြည်နယ်မှာ ကြက်ဥများအတွင်း သန်ကောင်သဏ္ဍာန်အရာတွေ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အမှန်မှာတော့ ဒါတွေဟာ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ တစ်သျူးများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။တစ်သျူးတွေဟာ သန်ကောင်ပုံစံရှိပေမယ့် သန်ကောင်လို ကပ်ပါးကောင်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချွှန်ဘူရီပြည်နယ်မှာ နေထိုင်သူ Rangsiya Sara-uppatham (၃၄ နှစ်) ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၃၁ ရက်နေ့က အဆိုပါကြက်ဥတွေရဲ့ပုံကို ဖေ့ဘုတ်မှာ တင်ကာ ကြက်ဥတွေကို Tesco Lotus စတိုးဆိုင်က ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အခုလိုမျိုး သန်ကောင်ပုံစံ တစ်သျူးတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ရက်မှာ Tesco Lotus စတိုးဆိုင်နဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနက အဆိုပါကြက်ဥတွေကို ယူဆောင်သွားပြီး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။Kasetsart တက္ကသိုလ်မှ … Read more
ယူရို(၁၀၁)သန်းအထိ ကံထူးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့နေအိမ်ကို ဓားပြက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလက စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးဟာ ကြိုးနဲ့ချည် ရိုက်နှက်ခံရတာမျိုးတွေအထိ ရှိခဲ့ပြီး၊ ပိုင်ဆိုင်မှု တော်တော်များများကိုလည်း ဓားပြလက် အပ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ယူရိုသန်းရာကျော် သူဌေးကြီး ဇနှီးမောင်နှံရဲ့အမည်ကတော့ David နဲ့ Angela Dawes တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဓားပြတိုက်ခံခဲ့ရပြီးနောက် Rother District Council အာဏာပိုင်တွေကို လုံခြုံရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သလို၊ CCTV ပါမစ်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ David နဲ့ Angela တို့ဟာ (၂၀၁၁)ခုနှစ်မှာ ဗြိတိန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးထီဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ သတ္တမမြောက် အမြင့်ဆုံးကံထူးရှင်တွေ ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ အဆိုတော် Tom Jones ရဲ့ ပေါင်သန်းချီ နေအိမ်ကိုတောင် ဝယ်ယူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။David တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ … Read more
ရွှေခရာယူနီဖောင်းဟောင်းလှပေါ့ဒီချိန်ခါ ကြည့်စမ်းပါဦးခင်ဗျာ မကွေးကပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကြီးရဲ့ ယူနီဖောင်း အဟောင်းလို့တောင် ဆိုမရဘဲ အစုတ်ဘက်ကိုသွားနေပြီ။ဒီယူနီဖောင်းကိုပင် ဝတ်လို့ရပါသေးတယ် သူ့လိုချင်တာ ဘောင်းဘီလို့ပြောရှာတဲ့ တစ်ကယ့် ရဲစစ်စစ်။ နှစ်စုံလောက်ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားပေးမယ်ပြောတော့ တစ်စုံဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ ပြန်ပြောဖို့စကား ဆွံ့အခဲ့။ဖိနပ်တစ်ရံ နှစ်သောင်းခြောက်ထောင်ဆိုတော့ ဈေးကြီးတယ် မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ ရင်ထဲကပါပါ ငြင်းတာပါ။ နှစ်သိန်းကျော်လစာ ယူနီဖောင်းမချုပ်နိုင်ရှာဘူး ဖိနပ်အသစ်တစ်ရံ ဝယ်မစီးနိုင်ဘူး ဒါယာဉ်ထိန်းအစစ်တွေရဲ့ ဘဝမှန်။ ကိုမိုး(မကွေးပရဟိတ) UNICODE ရှခေရာယူနီဖောငျးဟောငျးလှပေါ့ဒီခြိနျခါ ကွညျ့စမျးပါဦးခငျဗြာ မကှေးကပွညျသူ့ဝနျထမျးကွီးရဲ့ ယူနီဖောငျး အဟောငျးလို့တောငျ ဆိုမရဘဲ အစုတျဘကျကိုသှားနပွေီ။ဒီယူနီဖောငျးကိုပငျ ဝတျလို့ရပါသေးတယျ သူ့လိုခငျြတာ ဘောငျးဘီလို့ပွောရှာတဲ့ တဈကယျ့ ရဲစဈစဈ။ နှဈစုံလောကျခြုပျဖို့ ကွိုးစားပေးမယျပွောတော့ တဈစုံဆိုရငျအဆငျပွပေါတယျတဲ့ ပွနျပွောဖို့စကား ဆှံ့အခဲ့။ဖိနပျတဈရံ နှဈသောငျးခွောကျထောငျဆိုတော့ ဈေးကွီးတယျ မလုပျပါနဲ့တဲ့ ရငျထဲကပါပါ ငွငျးတာပါ။ နှဈသိနျးကြျောလစာ ယူနီဖောငျးမခြုပျနိုငျရှာဘူး ဖိနပျအသဈတဈရံ … Read more
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား​ပေး​ရေး​ကော်ပို​ရေးရှင်း လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများမှ ပြည်သူများနှင့်အတူ အိမ်အရောက် မီတာဖတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ မီးသုံးသူပြည်သူများ၏ မေလအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ယူနစ် ဖတ်ရှုခြင်းများကို ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၅ ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ မီးသုံးစွဲသူ ပြည်သူများ၏ နေရာသို့ အရောက် မီတာဖတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ မီတာဖတ်ရာတွင် ရန်ကုန်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း မီတာဖတ် ဝန်ထမ်းများမှ မီးသုံးသူပြည်သူများ၏ မျက်မြင်ရှေ့မှောက် အတူတကွ မီတာဖတ်ရှု့ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း အသိပေးကြေညာထားသည်။Covid-19 ကာလအတွင်း မီတာ​ခကောက်​ခံ​ငွေများပြားမှုမှာ မီတာဖတ်​ဝန်​ထမ်းများ၏ အားနည်းချက်​နှင့် မီတာခယူနစ်​သတ်​မှတ်​ချက်​​ကြောင့်ဖြစ်​​ကြောင်း လျှပ်​စစ်​နှင့် စွမ်းအင်​ဝန်​ကြီးဌာန၊ ဒုတိယအမြဲတန်းအတွင်းဝန်​ ဦးစိုးမြင့်က … Read more
ဗိုက်ကြီးနေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ က မကြာခင်မွေးဖွားတော့ မှာဖြစ်လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မော်ဒယ်မလေး
Trans-model Danna Sultana တစ်ယောက်ဟာ သူ့ ခင်ပွန်းရဲ့ရှစ်လအရွှယ်ကိုယ်ဝန်ဗိုက်က‌လေးကိုနမ်းနေသည့် နွေးထွေးဖွယ်ဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေခဲ့ ပါတယ်။Danna Sultana ဟာ ယောကျာ်းလေးအဖြစ်ကနေ မိန်းကလေးအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းထားသူဖြစ်ပါတယ်။ယောကျာ်းလေးမွေးရန် မျှော်လင့်နေသော သူမရဲ့ခင်ပွန်း Esteban Landrauဟာလည်း မိန်းကလေး ကနေ ယောကျာ်းလေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲထားသူတစ်ဦးပါ။ထိုColombian မော်ဒယ်ဟာ သူ့ရဲ့Instagram ရှိ followers 218000 အား ‘Love is Love’ ဟုရေးသားပြီး ဓာတ်ပုံများကိုမျှ‌ ဝေခဲ့ပါတယ်။Esteban ရဲ့ဝမ်းဗိုက် ဟာကျုံ့နေသောကြောင့် အချိန်မတန်ဘဲမွေးဖွားလာနိုင်တယ်ဟုထင်ကာ စုံတွဲနှစ်ဦး လုံးဆေးရုံသို့အမြန်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ရှစ်လအရွယ်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ ပုံမှန်လဏ္ခာ ဖြစ်ပြီး ကလေးက ကြီးထွားလာသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ဟု ဆရာဝန်က ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ Danna နှင့် Esteban တို့ဟာ စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ပြီး အိမ်သို့ပြန်လာကာ ကလေးလေး မွေးဖွားမည့် နေ့ရက်လေးကိုစောင့်ဆိုင်း‌နေကြပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာများ‌က … Read more
ဆေးရုံမှဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ CCTV ကင်မရာမှ သေဆုံးသွားသူတစ်ဦးရဲ့ wheelchair ဟာရွေ့လျားနေတာနေတာကို တွေ့ရှိကာ အလွန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီ wheelchair ရွေ့လျားနေတာကိုတော့ သေဆုံးသွားသောသူရဲ့ ဝိညာဉ်မှ သူ့ကိုယ်ပိုင် wheelchair ကို အသုံးပြုနေတယ်လို့ယုံကြည်နေကြပြီး ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Udon Thani မြို့ရဲ့ ဆေးရုံတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။မေလ၂၃ရက်နေ့က ဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းအရ wheel chair ဟာ ဘယ်သူမှအနောက်ကနေ တွန်းနေတာမရှိဘဲ ထောင့်ကနေတဖြည်းဖြည့်ချင်းရွေ့လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ထို wheelchair မှာဆင်ခြေလျောအသေးလေးအတိုင်း သူဘာသာလိမ့်ဆင်း လာတာလို့ထင်ရပေမယ့် ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာတော့ ဆင်ခြေလျှောအတိုင်း ရွေ့ဆင်းလာတာရပ်သွားကာအပေါ်ဘက်ကို အနောက်ပြန်ရွေ့လျားလာတဲ့အချက်က ဝိညာဉ်တစ်ခုကြောင့်လို့ ထင်သွားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာ wheelchair ဟာ ထားတဲ့နေရာမှာရှိမနေတာကို ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေက သတိပြုမိခဲ့ပြီး CCTV ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အကုန်လုံးထိတ်လန့်ကုန်ကြပါတယ်။ ထိုဆေးရုံရဲ့ နာမည်ကတော့ … Read more
၂. ၆. ၂၀၂၀ မနက်က ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာ ဘေးက မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးက YBS ၂ စီး ပြိုင်မောင်းလာတယ် တစ်စီးမှတ်တိုင်မှာ လမ်းပိတ်ပြီးရပ်တယ် နောက်ကားကို ညစ်တဲ့သဘောအဲဒီ့မှာ နောက်ကားက လမ်းလယ် ကွန်ကရစ်တားတုံးတွေကိုပါ ကျော်ပြီး လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းချလိုက်တယ် ဟိုကားကိုပြန်ကျော်ချင်တဲ့ သဘော အဲဒီ့မှာ Taxi လေးက ညာဖက်ကနေ ဗယ်ဘက်ကို U Turn ပြန်ဝိုက်မလို့ လုပ်နေချိန်မှာ YBS ၄၀ က တိုက်ချလိုက်တာပဲကားပေါ်က ခရီးသည် လင်မယားက မနက်တိုင်း ဈေးကြိုလာနေကျလင်မယားပါ ကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်ပါတယ် ကောင်မလေးက ကလေး မွေးထားတာ မကြာသေးဖူးလို့ ကြားတယ်ဗျ တဲ့သူတို့ ပြောစကားတွေကို နားထောင်ပြီး အစိုးရက ဘယ်လိုပဲ လူလို သူလို အဆင့်ရှိရှိလုပ်ပေးပါစေ ရ တစ်လုံးနဲ့ … Read more